Maxaa Dhacaya Markaad Isku Darto CBD-ka iyo Kafee-ka? Tani waa waxa ay Cilmi baaristu muujisay ilaa iyo hadda. • Dawooyinka Inc.eu
Maxaa dhacaya haddii aad isku daraysid CBD-ka oo leh kafeyn? Tani waa waxa cilmi-baaristu ay ilaa hadda muujinayso.
Dhawaan waxaa u muuqda inuu yahay daad nooc kasta ah CBD alaabta. Waxaa la muujiyey in CBD-ka sida qaabka cannabis-ku saleysan uusan keenin sare, waxay yaraynaysaa welwelka, kaa caawisaa inaad hurdo, yareyso bararka oo ay leeyihiin saameyn caafimaad oo wanaagsan. Haddii aad doorbidayso shumacyada, nacnaca, jalaatada ama qaxwaha kafeega, CBD soo saarka wax soo saarka ma u muuqdaan inay joojiyaan ballaarinta wax-soosaarka hal-abuurka. Laakiin waa maxay dhab ahaan saameynta isku darka CBD iyo kafeyn? Dalka Mareykanka tan aad baa loogu sameeyaa waxaana lagu bixiyaa dhammaan noocyada makhaayadaha. Isku darida kafeyn-kiciyaha kicinta leh ee loo maleynayo in ay qabowdo CBD waxay umuuqataa wax yar oo is khilaafsan oo aan caqli gal aheyn?
In kasta oo ay tahay Saamaynta dhiirrigelinta caafimaadka ee CBD si fiican ayaa loo yaqaan, cilmi baaris ku saabsan waxa dhaca markaad isku darto CBD iyo kafeyn weli si buuxda looma fahmin. Qeyb ka mid ah sababta tan ayaa ah, ilaa dhowaan, CBD, oo ka soo jeeda geedka hemp (ma aha dhirta marijuana), waxaa loo keenay sharci ahaan marijuana, taasoo ka dhigaysa helitaanka maalgelinta federaalka ee Mareykanka cilmi baarista aad u dhib badan. . Si kastaba ha noqotee, mahadsanid marinka Sharciga Beeraha ee 2018, waxaa la soo jeediyay in suuqa loogu talagalay waxyaabaha xashiishka (iyo baaritaanka sida ay u shaqeeyaan) ay sii kori doonaan xitaa 2019.
Inkasta oo ay ku dhiirri-galinayso in la baaro baaritaanka CBD, waaxda caafimaadka ee New York ayaa dhowaan u sheegtay makhaayadaha in CBD aan loo adeegi karin edibles (sida latteyaasha) maxaa yeelay "ammaan uma ahayn cunnooyinka lagu daro," ayay tiri Eater. CBD ayaa weli sharci ah in ay iska iibiso iyada oo qaabab kale (oo aad hubaal tahay inaadan u baahnayn inaad ka sameysid gudaha Mareykanka ee latte), laakiin go'aanka ayaa ka shakiyey cabsida ku saabsan amniga iyo waxtarka ee cabitaanka qaxwaha CBD iyo walaac.
Taasi waxay tidhi, waxaa jira daraasado lagu eegay waxa dhacaya markaad isku dardarayso labadaba. Daraasad lagu daabacay Jariidada Daaweynta gudaha ee la ogaaday in qaxwaha iyo xashiishadu ay dhaqaajiyaan qaar ka mid ah waddooyinka isku midka ah ee maskaxda. "Dareemayaasha neerfaha ee la xiriira nidaamka endocannabinoid - kuwa la midka ah ee xashiishadda wax looga qabto - waxay yaraadeen ka dib markii la cabo afar ilaa siddeed koob oo bun ah maalintii, taas oo ka soo horjeedda waxa dhaca ka dib marka qof uu isticmaalo xashiishad," ayaa lagu yiri warsaxaafadeed ku saabsan daraasadda per emaylka loo diro ayuu yiri.
Cilmi-baaris dheeraad ah ayaa loo baahan yahay in lagu sameeyo isku-dhafka kafeega ee leh CBD
Marka laga hadlayo saameynta saxda ah ee waxyaabaha isku qasan kafeega, waxaa jira cilmi baaris badan oo dheeri ah oo la sameeyo - laakiin waxaa la heli karaa caddeyn badan oo aan rasmi ahayn. In kasta oo aad u maleyn karto in soo-saarka kafeegaaga subaxa ahi uu kor u qaadi karo qabow-gaaga CBD-da (anecdotally) tani had iyo jeer maahan kiiska. Dr. Bonni Goldstein, MD, oo ah agaasimaha caafimaadka ee xarumaha Canna-Centers, ayaa sheegtay in horey loo qoray in sida qof uu ula dhaqmo CBD ay tahay xaalad-kiis-iyo saameynta isku-darka kafeega aan wali si buuxda loo fahmin.
"Ma cadda xilligan waxa dhexgalka saxda ah ee ka dhexeeya CBD iyo kafeyn," ayay tiri. “Qiyaaso yar, CBD waa kicin kiciyeyaal badanna waxay sababi kartaa dajin. Jawaabta uu qofku ka bixiyo isku darka isku-darkaas si sahal ah looma saadaalin karo maxaa yeelay qiyaaso kala duwan oo mid kasta ah ayaa saameyn ku yeelan doona jawaabta. “
Erin Magner ayaa u qoray Well Well ... in dadka qaarkood ay soo sheegaan isku darka CBD ee qaxwada wuxuu xoojiyaa feejignaanta isla mar ahaantaana wuxuu ka saaraa dhibaatooyinka mararka qaarkood qallafsan ee kafeega. Haddii aad ka hesho kafiin weyn lafaarta 'espresso', in yar ayaa jilcin karta saameyntaas. "Waxa aan dadka ka maqlo ayaa ah inay la kulmi karaan fiicnaanta, feejignaanta, tamarta xoogga leh ee kafeega ah iyada oo aan la helin wax weyn oo ku dhaca," Jewel Zimmer, aasaasaha xashiishadda iyo sumadda saliidda CBD ee Juna, ayaa u sheegay Well + Good.
Sida isticmaalka badan ee CBD, cilmi baarista ku saabsan saameynteeda oo ay weheliso kafeynku ma ahan mid dhameystiran oo ballaaran sida ay noqon karto, laakiin taasi way is beddeleysaa. Dhanka kale, inaad ka feejignaato isticmaalkaaga CBD, sida qaadashada qaddar yar markiiba, iyo inaad ku kalsoonaato tayada sheyga aad isticmaaleyso, waxay kaa caawin doontaa inaad sameyso xulasho xog-warran oo ku saabsan waxa adiga kuu shaqeynaya ama aan kuu shaqeyn doonin.
Akhristayaashu waxay u baahan yihiin inay ogaadaan in shuruucda iyo xogta ku saabsan marijuana, CBD iyo waxyaabaha kale ee la xidhiidha ay weli yihiin isbeddel. Sidan oo kale, macluumaadka fariintan waxaa laga yaabaa inaan lagu talin sidii talo caafimaad ama sharci. Had iyo jeer la tasho dhakhtarkaaga ka hor intaanad isku dayin walax ama dheeraad ah.
Akhri wax badan oo ku saabsan Bustle (EN, ilaha)
AmericaCBDsaliid cbdcaafimaad lehcaafimaadkaxagashasharci ahaanmicrodosingcilmi baarisMaraykankacunto
Daraasad: Niyad jab iyo walwal ayaa ka sareyn kara dadka qaba cilladda isticmaalka xashiishadda (CUD)
Daraasad ayaa dhowaan lagu daabacay Joornaalka Cilladaha Cudurrada leh, oo baaray daraasadaha faafa ee ...
Saliida CBD ee xayawaanka raba: sida sidee ammaan u tahay?
Farxadda 4ta Luulyo! Rashka ayaa laga yaabaa inuu adiga iyo reerkaaguba idiinku raaxeysto, laakiin idinka ...
Go'doominta CBD iyo kaamirada buuxda ee CBD. Maxay ku kala duwan yihiin?
Waxay u egtahay in intaad wax u iibsanaysid CBD, aad ka heli doonto ereyada "spectrum buuxa" iyo "go'doon" ...